VideoAsk: Dhis ka-qaybgalka, isdhexgalka, shakhsi ahaaneed, Funnels Fiidiyowga Asynchronous
Isniin, April 18, 2022 Isniin, April 18, 2022 Douglas Karr
Toddobaadkii hore waxa aan buuxinayay sahanka saamaynta leh ee badeecad aan u malaynayay in ay mudan tahay in la horumariyo sahanka la codsadayna waxa lagu sameeyay muuqaal. Waxay ahayd mid soo jiidasho leh… Dhinaca bidix ee shaashaddayda, waxaa su'aalo i weydiiyey wakiil shirkad… Jawaabahaygu waxay ahaayeen waqtiyo waxaanan awood u lahaa inaan dib u duubo jawaabaha haddii aanan ku qanacsanayn
Halkee laga Dalbanayaa Hab-Saaxiibeedka Caadiga ah, Baakadaha Joogtada ah ee Alaabta Ecommerce-kaaga
Jimco, Abriil 15, 2022 Jimco, Abriil 15, 2022 Douglas Karr
Marar dhif ah usbuuc ayaa ii soo baxa in aanan helin nooc ka mid ah geynta gurigayga. Nolol mashquul badan ayaan ku jiraa sidaa darteed ku habboonaanta helitaanka agabka Amazon Key ee alaabta ama raashinka gudaha garaashka ayaa aad u adag in la dhaafo. Taasi waxay tidhi, aad baan uga warqabaa in ay jiraan qashin badan oo la xidhiidha caadooyinkayga. Mid ka mid ah qoraallada xiisaha leh ayaa ah in marka qashinka dib-u-warshadaynta la soo saaro
Vendasta: Ku qiyaas Wakaaladda Suuqgeynta Dijital ah ee Label-ka-dhamaadka-ilaa-Dhammaadka
Haddi aad tahay wakaalad bilow ah ama wakaalad dhijitaal ah oo qaangaadha, cabirida wakaaladaada waxay noqon kartaa caqabad adag. Runtii waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu cabbiro wakaalada dhijitaalka ah: Hel Macaamiisha Cusub - Waa inaad maal gashataa iibinta iyo suuq-geynta si aad u gaadho rajooyin cusub, iyo sidoo kale inaad shaqaalayso kartida lagama maarmaanka u ah si aad u fuliso hawlgelintaas. Bixi Alaabooyin iyo adeegyo Cusub - Waxaad u baahan tahay inaad kordhiso wax bixintaada si aad u soo jiidato macaamiisha cusub ama u kordhiso
7 Xeelado Suuqgeeyayaasha Ku Xidhan ee Guulaysan Waxay Isticmaalaan Si Ay Dakhliga Ugu Keeno Noocyada Ay Kor U Qaadaan
Suuqgeynta Affiliate waa hab ay dadka ama shirkaduhu ku kasban karaan komishanka suuqgeynta summada, badeecada, ama adeegga shirkad kale. Ma ogtahay in suuq-geynta xiriirku ay horseeddo ganacsiga bulshada oo ay la mid tahay suuq-geynta iimaylka ee soo saarista dakhliga khadka? Waxaa isticmaala ku dhawaad ​​shirkad kasta, sidaas darteed, waa hab weyn oo loogu talagalay saameeyayaasha iyo daabacayaasha si ay ugu dhexgalaan hawlahooda. Affiliate Suuqgeynta Furaha Tirakoobka Affiliate Affiliate Suuqgeynta xisaabaadka waa dhammaatay
Waxaan la shaqaynaynaa macmiilka WooCommerce hadda kaas oo UPS ciwaankiisa ansaxinta iyo xisaabinta qiimaha rarida ay joojisay shaqada. Arrintii ugu horreysay ee aan aqoonsannay waxay ahayd UPS shipping plugin ay haysteen oo duugoobay iyo xudunta u ah shirkadda soo saartay inay leedahay malware… taasi weligeed calaamad wanaagsan maaha. Markaa, waxaanu soo iibsanay plugin WooCommerce UPS maadaama ay si fiican u taageereen soosaarayaasha Woocommerce. Iyadoo goobta aan la ansaxinayn ciwaannada mana dhexgelin dhoofinta, our